Indlela yokongeza imibhalo engezantsi kunye negama lokugqibela kwiLizwi 2016
Zombini imibhalo esemazantsi kunye namagama okugqibela kwiLizwi 2016 aqukethe ulwazi lwebhonasi, ingcaciso, okanye ecaleni ukongeza isicatshulwa kwiphepha. Ngamnye uphawulwe ngenani elibhalwe phantsi okanye unobumba kwisicatshulwa1.
Umahluko phakathi kombhalo osemazantsi kunye nomqukumbelo ukwindawo yokubekwa: Umbhalo osemazantsi ubonakala emazantsi ephepha kwaye isiphelo siyavela ekupheleni koxwebhu. Ngaphandle koko, zombini izikhombisi zenziwe ngendlela efanayo:
pg 600 ngezinja
Cofa imouse ukuze isalathiso sokufaka sibe ngasekunene kwegama okanye isicatshulwa ofuna ukuba umbhalo osemazantsi okanye isiphelo sokugqibela kubhekiswe kuso.
Akukho sidingo sokuchwetheza inombolo yenqaku; yenziwe ngokuzenzekelayo.
Cofa kwiTebhu yeeReferensi.
yintoni i-potassium bicarbonate
Ukusuka kwiqela lamaNqaku eMibhalo, khetha nokuba Faka uMbhalo osemazantsi okanye Faka iqhosha lomyalelo lomyalezo.
Inombolo ebhalwe ngasentla ifakwe kwisicatshulwa, kwaye kwangoko ushukunyiselwa emazantsi ephepha (umbhalo osemazantsi) okanye esiphelweni soxwebhu (isiphelo).
Thayipha umbhalo osemazantsi okanye isiphelo sokugqibela.
Ukubuyela kwindawo owawukuyo uxwebhu, cinezela Shift + F5.
Iqhosha elinqumlayo le-Shift + F5 libuyela kwindawo yangaphambili kuxwebhu lwakho apho ubuhlela khona.
Nazi ezinye iinowuthsi zokugqibela:
Indlela emfutshane yekhibhodi yokufaka umbhalo osemazantsi yiAlt + Ctrl + F.
ipilisi emhlophe ene-u03
Indlela emfutshane yebhodi yezitshixo yokufaka inqaku lokugqibela yiAtl + Ctrl + D.
Ukuba unomdla, uya kufuna ukwazi ukuba indlela emfutshane yebhodi yezitshixo Alt + Ctrl + E yenza kwaye ikhubaze uphawu lweLizwi loPhawu lweeNqaku.
Umbhalo osemazantsi kunye namanqaku okugqibela ahlaziywa ngokuzenzekelayo ukuze yonke imibhalo esemazantsi kunye namagama okugqibela alandelane kuxwebhu lwakho.
Ukukhangela amanqaku asezantsi kunye namagama okugqibela, cofa indawo yokuKhangela. Kwiqela lamaNqaku aManqaku, sebenzisa i Iqhosha elilandelayo lombhalo kwimenyu yokukhangela phakathi kombhalo osemazantsi kunye nezalathiso zomqukumbelo.
Ungajonga imibhalo engezantsi okanye umxholo wokugqibela ngokuhambisa isalathi sempuku kwinombolo ebhalwe kumbhalo woxwebhu.
Sebenzisa iqhosha lokubonisa amaNqaku (ithebhu yereferensi, iqela lemibhalo esemazantsi) ukujonga amanqaku asemazantsi okanye amanqaku asemva njengoko avela kwiphepha.
iziphumo ebezingalindelekanga ze-spironolactone
Ukucima umbhalo osemazantsi okanye umbhalo osemva, gqamisa inombolo yereferensi kwisicatshulwa kwaye ucinezele iqhosha lokucima ILizwi liphinda liphinde linike igama kwakhona nayiphi na imibhalo esemazantsi okanye amanqaku asemva.
Ukuguqula umbhalo kumbhalo osemazantsi, cofa ekunene isicatshulwa esisezantsi kwephepha. Khetha umyalelo Guqulela kwiNqaku lokugqibela. Ngokukwanjalo, unokuguqula amanqaku asemazantsi kwimibhalo esemazantsi ngokunqakraza ekunene kwisiphelo sendlela kwaye ukhethe umyalelo Guqulela kumbhalo osemazantsi.
Ukulawula okongezelelweyo kwimibhalo esemazantsi kunye namagama okugqibela, cofa ibhokisi yencoko yebhokisi yencoko yababini kwiqela lamaNqaku. Sebenzisa ibhokisi yencoko yababini kunye neNqaku lokugqibela ukwenza ibhokisi yendawo ekubhekiselwe kuyo, ifomathi, inombolo yokuqala, kunye nezinye iindlela.
ukukhanya simahla o ukulandelelana kwerama
ungasela ngelixa uthintela amayeza okubulala iintsholongwane
Banamine idosi yeenkomo
Idosi eqhelekileyo yelorazepam
Ungayiguqula njani i-cd kwi-mp3